EXO-L တွေထပ်ပြီးဂုဏ်ယူရဦးမယ့် EXO ရဲ့ အံ့မခန်းအောင်မြင်ချက်! – Trend.com.mm
Posted on November 15, 2018 November 15, 2018 by Noel
EXO ကတော့ ကေပေါ့ပ်လောကမှာ million seller legends ဖြစ်နေပါပြီ။မကြာသေးခင်က သူတို့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်သစ် “Don’t Mess Up My Tempo”ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအယ်လ်ဘမ်ဟာ စတင်ရောင်းချပြီး ၁၀ရက်အကြာမှာပဲ အချပ်ရေ ၁၁၇၉၉၉၇ ချပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့လို့ quintuple million sellers ဆုတောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအယ်လ်ဘမ်သစ်ဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၄၇နိုင်ငံရဲ့ iTunes တွေမှာထိပ်ဆုံးရောက်ခဲ့သလို the United World Chart ၊ China’s China Xiami Music Top Chart ၊ domestic streaming charts တွေမှာပါ နံပါတ်တစ်နေရာကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Billboard 200 albums chart မှာလည်း နံပါတ် ၂၃ နေရာကရပ်တည်နေပြီး ဒါက EXO အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောရင်ရပါတယ်။
အချပ်ရေသန်းပေါင်းများစွာရောင်းချနိုင်တဲ့ “Don’t Mess Up My Tempo”အယ်လ်ဘမ်သစ်ဟာ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုသလို အခုဆိုရင် EXO ဟာ စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ် ၅ခု၊မီနီအယ်လ်ဘမ် ၂ခု၊winter special အယ်လ်လမ်၊ Live အယ်လ်ဘမ်စတဲ့အယ်လ်ဘမ်တွေကို စုစုပေါင်းအချပ်ရေ ၁၀သန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကိုရီးယားအနုပညာရှင်ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ Gaon Charts စာရင်းအရသိရပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်ကိုးယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ EXO ဟာ သူတို့ရဲ့ ပွဲဦးထွက်ကို ၂၀၁၂ က စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ မှာတော့ စုစုပေါင်းအယ်လ်ဘမ်အချပ်ရေ ၁၀သန်းကျော်ရောင်းချနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ကိုရီးယားBoy Band တစ်ခုဖြစ်လာတာပါပဲ။Congratulations EXO!
EXO ကတော့ ကပေေါ့ပျလောကမှာ million seller legends ဖွဈနပေါပွီ။မကွာသေးခငျက သူတို့ရဲ့ အယျလျဘမျသဈ “Don’t Mess Up My Tempo”ထှကျရှိခဲ့ပွီး အဲ့ဒီအယျလျဘမျဟာ စတငျရောငျးခပြွီး ၁ဝရကျအကွာမှာပဲ အခပျြရေ ၁၁၇၉၉၉၇ ခပျြရောငျးခနြိုငျခဲ့လို့ quintuple million sellers ဆုတောငျရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီအယျလျဘမျသဈဟာ နိုငျငံပေါငျး ၄ရနိုငျငံရဲ့ iTunes တှမှောထိပျဆုံးရောကျခဲ့သလို the United World Chart ၊ China’s China Xiami Music Top Chart ၊ domestic streaming charts တှမှောပါ နံပါတျတဈနရောကိုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။Billboard 200 albums chart မှာလညျး နံပါတျ ၂၃ နရောကရပျတညျနပွေီး ဒါက EXO အဖှဲ့ရဲ့ အကွီးမားဆုံးအောငျမွငျမှုတဈခုလို့ပွောရငျရပါတယျ။
အခပျြရသေနျးပေါငျးမြားစှာရောငျးခနြိုငျတဲ့ “Don’t Mess Up My Tempo”အယျလျဘမျသဈဟာ အကွီးအကယျြအောငျမွငျခဲ့တယျဆိုသလို အခုဆိုရငျ EXO ဟာ စတူဒီယိုအယျလျဘမျ ၅ခု၊မီနီအယျလျဘမျ ၂ခု၊winter special အယျလျလမျ၊ Live အယျလျဘမျစတဲ့အယျလျဘမျတှကေို စုစုပေါငျးအခပျြရေ ၁ဝသနျးကြျောရောငျးခနြိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကိုရီးယားအနုပညာရှငျကပေေါ့ပျအဖှဲ့ဖွဈလာခဲ့ပွီလို့ Gaon Charts စာရငျးအရသိရပါတယျ။
အဖှဲ့ဝငျကိုးယောကျနဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ EXO ဟာ သူတို့ရဲ့ ပှဲဦးထှကျကို ၂၀၁၂ က စတငျပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ မှာတော့ စုစုပေါငျးအယျလျဘမျအခပျြရပေေါငျး ၁ဝကြျောရောငျးခနြိုငျတဲ့ ပထမဆုံး ကိုရီးယားBoy Band တဈခုဖွဈလာတာပါပဲ။Congratulations EXO!
ပန်းသီးအခွံမခွာပဲစားတတ်သူတွေသာ ရရှိနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ…